बिप्लवको शक्ति र सरकार - Janakpur Today
बिप्लवको शक्ति र सरकार
नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बिप्लव) माथिप्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरुकागतिविधिनियन्त्रितगर्न सुरक्षाकर्मीका लागिअलिकति सजिलो भएको छ । यो अनुभवकेही सुरक्षाकर्मीको हो । जसको अनुभव जे भएपनि, बिप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीका गतिविधिहरुले हिंसाका समस्यालाई बिस्तार दिएका छन । बिप्लवको पार्टीमाथिप्रतिबन्धलगाउनु ठीक थियो कि थिएन? यो अहिलेको प्रश्नहोइन ।
हिंसाकाबिरुध्दतात्तातो कारबाहीगरेर लोकप्रियहुुने रहर कुनैपनि सरकारलाई हुन्छ । दुर्भाग्य के भने, त्यसरी प्रतिबन्धलगाएर न त सरकारको लोकप्रियता बढछ, न त हिंसाको समाधान नै हुन्छ । त्यसैले सरकारले बिप्लव समूहमाथिलगाएको प्रतिबन्धको घटना न त सामाजिक परिवेशमामिसिन सकेको छ । न त त्यसले सकारात्मक असर नै पार्न सकेकोछ । यो सत्य कुरा हो, त्यो प्रतिबन्धको खास कुनै अर्थ निस्किन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीकेपीओली नेतृत्वको सरकारप्रति चारैतिर निरपेक्षताको भाव बढदै गएको छ ।
सरकार दुइतिहाइमतको आधारमा निर्वाचितभएपनि सरकारले जनताको दुःख दर्द निवारणका लागिखासै केहीगर्न सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु प्रभावकारी देखिएका छैनन भने प्रमओलीको चरित्र कथावाचकको जस्तो छ । यो अवस्थामा देशको ‘मुहार’ परिवर्तनको नारा लिएर हिंडेको पार्टी र त्यसकाकार्यकर्ताको जोश बढनु अस्वाभाविकहोइन ।
सरकारी आंकडाका आधारमा बिप्लव समूहको मूल्यांकनगर्ने हो भने हालकालागियसको प्रभाव र शक्तिकमजोर देखिएपनि साहस चुकेको देखिएको छैन ।देशमाअसन्तोषको जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई मध्येनजर गर्ने हो भने बिप्लवको शक्तिव्हात्तै बढने सम्भावना छ । आंकडाले नै बताउँछनः सरकारले बिप्लव समूहमाथिप्रतिबन्धलगाउनु अघिबैशाख देखि फागुनको पहिलो हप्mतासम्ममाओवादीका १९० जनाकार्यकर्तापक्राउपरेका थिए ।
उनीहरुकाबिरुध्ददर्ता भएका मुद्दा संख्या१७२ थियो ।सरकारले पार्टीमाथिप्रतिबन्ध लगाएपछि गिरफ्तार हुनेको संख्याव्हात्तै बढ्यो । बितेको फागुनदेखि असारसम्मको अवधिमा५७३ जनामाओवादीकार्यकर्ता पक्राउ परेका छन । यीमध्ये ८१ जनालाई पूर्पक्षकालागि कारागार चलान गरिएकोछ भने ८६ जनाअनुसन्धानको क्रममा रहेकाछन । ५२४ जनाकाबिरुध्द मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सोधपूछपछि छुटेका थोरै छन– जम्मा ३९ जनामात्र । ३६७जनाकाबिरुध्दमुद्दा दर्ता भएकोछ । स्वतन्त्रजीवनबिताउने शर्तमा बिप्लवसमूह परित्याग गरी छुटेकाहरुको संख्या ३५२ छ ।प्रहरी कारवाहीमासर्लाहीमा१जना रभोजपुरमा १जनाकार्यकर्ताको मृत्यु भएकोछ ।
पाँचजनाबिप्लवकाआफनैकार्यकर्ता रएकजना सर्वसाधारण सहित७जनाघाइते भएका छन ।
सरकारले बिप्लव समूहमाथिप्रतिबन्धलगाएर इच्छित परिणाम पाउन सकेको छैन । यसमा सुरक्षाकर्मीको भन्दापनि राजनीतिक नेतृत्वकोअसक्षमब्यबहार जिम्मेवार छ । प्रमओलीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबादलआफनाकदमप्रतिआफैं बिश्वस्त देखिदैनन । उनीएकातिर बिप्लवमाथिप्रतिबन्ध लगाउँछन, अर्कोतिर बिप्लवसंग आफनो गृहमन्त्रित्वको साख र आधार बचाइदिनवार्तामा आउने निम्तो दिन्छन । एकातिर, प्रमओलीआफना गृहमन्त्रीले बिप्लवलाई पिंजरामापार्ने कुरामाआश्वस्तहुन चाहन्छन । अर्कोतिर, सरकारका प्रवक्तातथा संचारमन्त्रीबिप्लवकाबिरुध्द कडा समन जारी गर्दछन ।
यो कस्तो रणनीति हो ?हिंसाको राजपाठ छोडेरयति सजिलै बिप्लव सरकारको शरण पर्छन जस्तो कसैले सोचेको छैन । बिप्लवलाई थाह छ, यतिबेला हिंसाको सहाराले तीजनताको समर्थन लिन सकिन्छ जो बर्तमान सत्ताको बेढंगे गतिबिधि देखेर दिक्कभएका छन । जनता न शहरमा खुशी छ, न गाउँमा । सरकार बाहिर पार्टीको तहमा प्रचण्डले पनिबिप्लवको हिंसात्मकअभियानलाई खासै महत्वदिएको देखिदैन । यो बुझननसकिने कुरा होइन ।
जतिबेला पार्टी बलियो थियो र प्रचण्ड पार्टीका अध्यक्षथिएत्यतिबेलापनिबिप्लवले पाउनुपर्ने ‘केहीपनि’पाएकाहोइनन । पार्टीमा उनको जीवनअत्याशमाबितेको थियो । अहिले उनीमाओवादीबिद्रोहीका नेताका रुपमा प्रचण्डले नेपाल सरकारसंग गरेको बृहत्तशान्ति सम्झौताकाबिरुध्दउभिएका छन । उनको भनाइ छ, त्यो शान्ति सम्झौताअपर्याप्तथियो । माओवादी पार्टीले आफना उद्देश्यहरु प्राप्तनगरी सरकारसंग गरेको सम्झौताको उत्तराधिकारित्व स्वीकारगर्न उनीतयार छैनन । माओवादीविद्रोहमालागेका सबैलाई बृहत्तशान्ति सम्झौताको छातामुनी एकत्रितगर्न नसक्नु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको गल्तीहो ।
बाबुरामले त्यसबाट मुक्तिपाउन सक्दैनन । बाबुरामको हकमायतिपक्कै भन्न सकिन्छ ः उनीशान्तिको मिसन पूरा नहुँदै प्रचण्डसंग छुट्टिए । यो उनको गलत निर्णय थियो । प्रचण्डलाई आर्थिक र राजनीतिकआरोप लगाएर निस्किनु भन्दापहिले बाबुरामले शान्तिप्रक्रिया र सहमतिकाथुप्रै कुराका सम्बन्धमा सोच्नु पर्दथ्यो । उनीत्यसमा चुके । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया टुंगिएको छैन । जवसम्म सत्य–तथ्य निरुपण आयोगको काम शुरु हुँदैन, जबसम्मयुध्दका अपराधीहरुको टुंगो लाग्दैन तबसम्मशान्तिकाबाँकीप्रक्रिया अगाडि बढदैनन ।
अहिले प्रदेशकातहमाजतिपनि कुरा उठाइएका छन ती सबैको बाटो संघीयताका बिरुध्द तेर्सिन्छन । देशको प्रतिबध्दताको रुपमा रहेको संघीय शासनलाई पछ्याउननसक्ने हो भने नेपालले आफनो भविष्यकाबारेमा सोच्न छोडिदिए हुन्छ । संघीय शासनशान्ति–प्रक्रियाकै एक अंगहो । हिजो संघीयता अपनाउने बेलामा यिनै नेताहरु निर्णायकथलोमा थिए । तर, यताआएर संघीयता यूरोप र अमेरिकाले थोपरेको भन्नथालेका छन । देशको शान्ति–प्रक्रियाको टुंगो लगाउनदशौंपटक यूरोप र अमेरिकाको भ्रमणगरेर बैठकमा प्रस्तुत गरिएकाकार्यसूचिमा सहीछाप गरेर आउने नेताहरुले यस्तो कुरागर्न सुहाउँछ ?
देश अराजकताको भूमरीमा रिङने आशयका अनेक लक्षण देखा परेका छन । प्रमओलीलाई दुइनम्वर प्रदेशको अस्तित्व नै मन परेको छैन । उनीदुइनम्बरलाई पाँचनम्बरजस्तै पहाडसंग जोडिएको प्रदेश बनाउनचाहन्थे । तर, त्यतिखेर कांग्रेसले मानेन भन्ने भनाइआयो प्रमओलीको । अहिले प्रदेशनम्बर दुइबफर स्टेट जस्तो बन्यो रे ! (नेपालभारतको बीचमा त होला नि ।) गजब के भो भने दुइनम्बरमा ओलीको पार्टी बलियो निस्कियो । त्यो जनमतको स्वीकृतिथियो त ?खोइ त, कुनबुध्दिजीवीले प्रश्न उठायो ?कुन मिडियाले आवाज उठायो ?
निश्चयपनि, बिप्लवको हिंसात्मकगतिविधिको समर्थन कसैले गर्न सक्दैन । यसको अर्थ, बिप्लवले हिंसा भडकाए वा भडकाउन खोजे भनेर बिप्लव र उनकाकार्यकर्ताका बिरुध्द राज्यको गोलीचल्नु हुँदैन । संसारमा सबै समस्याका समाधान छन । बिप्लवका समस्यापनि समाधानमानपुग्ने खालका छैनन । कम्युनिष्टहरुको घात–प्रतिघातको राजनीतिको चेपमा देशकाशान्तिप्रियजनता पर्नुहुँदैन । माओवादीका नेताहरु, यस्तो लाग्दछ, सबै आ–आफनै स्वार्थको पोषणमा लागेका छन । देशको चिन्ता कसैमा देखिदैन । अहिलेको समयमा सबैभन्दाजिम्मेवार हुनुपर्ने पुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेता नै नीरिह देखिएका छन भने अरुको के कुरा गर्नु ?
पाँच घण्टे स्वास्थ्य शिबिरमा २ सय ३० जनाद्धारा स्वास्थ्य लाभ